Soo dejisan VLC 2.2.4 – Windows – Vessoft
Soo dejisan VLC
VLC – ciyaaryahan caalami ah u ciyaaro maqal iyo video faylasha. Muuqaaladan weyn ee software ka mid ah: arkaysid wax waxyeelo video faylasha, u joojiyaan shaqada jir, is dhexgalka noocyada kala duwan ee sidayaal, subtitles taageero, hotkeys dejinta iwm VLC kuu ogolaanayaa inaad aragto la ogaaday, video faylasha internet-ka oo kuu ogolaanaya inaad sameyso server ka ciyaaryahan kuwaas oo video warbaahin ee shabakadda. Software waxa ku jira dhisay-in module oo awood si loogu badalo faylasha warbaahinta in qaabab kala duwan. VLC uu leeyahay shaqo ee TV calaamad Qabsashada oo suurta gelineysa in ay xirmaan kordhin badan.
Support of qaabab warbaahinta caansan
View of faylasha dhaawacan
Rogo ama faylasha warbaahinta
Kartida aad u baahisa video in shabakadda
Comments on VLC:
VLC Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... KaraFun Player 2.3
English, Español, 中文, 日本語... Vim 8
English, Français, Español, Deutsch... Comodo Dragon 52.15.25.663
English, Français, Español, Deutsch... WinMount 3.5.1018 iyo 3.4.1020